ဒီဇင်ဘာလ | Mahasi Sasana Yeik Tha
Submitted by mahasi_editor on Wed, 01/17/2018 - 12:41
၁ ၂-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု ၄၀,၀၀၀
၂ ။ ဦးဟန်မြိုင်+ဒေါ်မေသက်မော်(သီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီ) မော်မော်စန်း-ထိုးမုန့် မိသားစုကောင်းမှု။ လမ်း(၈၀)၊ ၂၈-၂၉ လမ်း၊ မန္တလေးမြို့။ ၁,၅၀,၀၀၀
၃ ။ နှစ်ဘက်သော မိဘများအားအမှူးထား၍ ဦးကျော်ကျော်ဇင်+ သုဓမ္မသိင်္ဂီ ဒေါ်ခင်ခင်ချောလွင်၊ သမီး-မအိမ့်မြတ်ချယ်၊ သား-မောင်အောင်ဘုန်းခန့် မိသားစု။ မန္တလေးမြို့။ ၅,၀၀,၀၀၀
၄ ။ ဦးမြင့်နိုင်+ဒေါ်ခင်ရွှေ (သုဓမ္မသိင်္ဂီ)မိသားစု။ အာရှနိုင်အင်တာပရိုက်စ်နှင့် ရွှေဘုန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ၃၄-လမ်း၊ ၇၇-၇၈ ကြား၊ မန္တလေးမြို့။ ၁၀,၀၀,၀၀၀
၅ ၃-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု။ ၁,၁၀,၀၀၀
၆ ။ တောင်ဝိုင်းလေးဆရာတော် ဦးအာဒိစ္စ အားရည်စူး၍ တောင်ဝိုင်းလေးဆရာတော် ဦးဝါသ၀နှင့် တပည့်ယောဂီများကောင်းမှု။ တောင်ဝိုင်းလေးသတိပဋ္ဌာန်ပြန့်ပွားရေး၊ တောင်ဝိုင်းလေး၊ မော်လမြိုင်။ ၇,၀၀,၀၀၀
၇ ၄-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု ၁,၈၅,၀၀၀
၈ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ဦးခင်မောင်ရီ+ဒေါ်စု၊ ကိုရဲဝင့်သူ+မမြတ်မြတ်စိုး၊ သမီး-အေးမြတ်သူ မိသားစု။ စဉ့်ကူးမြို့ ၁,၀၀,၀၀၀
၉ ။ ဦးသန်းဝင်း+ဒေါ်သန်းသန်းမြ မိသားစု။ (၁၃၈)၊ ဓမ္မဂုဏ်ရည်လမ်း၊ နားမခေါ်ရပ်ကွက်(၁)၊ လားရှိုးမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၁၀ ၉-၁၂-၂၀၁၇ ဦးအောင်မင်း ကောင်းမှု။ ၄၅/ထီးတန်းလမ်း၊ ဆေးရိုးတန်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၅,၀၀၀
၁၁ ။ ဦးခင်မောင်ဦး (ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်-ငြိမ်း)+ဒေါ်သန်းသန်းစော၊ သမီး-ဒေါက်တာမြတ်မြတ်ဦး၊ သား-ကိုကျော်ထင်ဦး U.S.A မိသားစု။ အမှတ်(၁၃/၅၄)၊ ဇေယျာသုခလမ်း၊ သုဝဏ္ဏ။ ၅,၀၀,၀၀၀
၁၂ ၁၀-၁၂-၂၀၁၇ ဖခင်ကြီး ဦးတိုက်စိုး (၅)နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစု။ အမှတ်(၂၃)၊ ကြို့ကုန်းရိပ်သာ၊ အင်းစိန်။ ၃,၀၀,၀၀၀
၁၃ ၁၁-၁၂-၂၀၁၇ နမ့်လန်ဆရာတော် ဦးဉာဏိက ကောင်းမှု ၁,၀၀,၀၀၀
၁၄ ။ ဒေါက်တာဦးမျိုးသွယ်+ဒေါက်တာစန်းစန်းဝေ မိသားစုကောင်းမှု ၁၀,၀၀,၀၀၀
၁၅ ။ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီရိပျံချီ ဦးအောင်သန်းထွဋ် (ငြိမ်း)၊ ဒေါ်ချယ်ရီ မိသားစုကောင်းမှု ၅,၀၀,၀၀၀
၁၆ ။ ဦးထွန်းဝေ+ဒေါ်စိန်တင့် မိသားစု ကောင်းမှု ၃၀,၀၀၀
၁၇ ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ မိခင်(ဒေါ်ခင်ငြိမ်း) အားရည်စူး၍ သား-ကိုကျော်ကျော်ဝင်း+မတင်မို့မို့ဝင်း၊ သား-ငြိမ်းချမ်းဦး၊ မောင်သော်ဇင်ရှိုင်း မိသားစု ကောင်းမှု။ တွံတေးမြို့ ၁၀,၀၀၀
၁၈ ၁၄-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ခင်ခင်ဖြူ နှင့်မြေး-မခင်အုန်းလှိုင် ကောင်းမှု။ အမှတ်(၄၀၃)၊ တာဝါ - B၊ မလိခကွန်ဒို၊ ရတနာလမ်း၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၃၀,၀၀၀
၁၉ ။ M. M. G မိသားစု ကောင်းမှု။ ၂၉၂၈/စက်မှုပတ်လိုင်း၊ စက်မှုဇုံ(၂)၊ ၆၃-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံ။ ၅,၀၀,၀၀၀
၂၀ ၁၆-၁၂-၂၀၁၇ MR. SEIICHI TAKARABE အားရည်စူး၍ AWITD ၀န်ထမ်းများကောင်းမှု။ ပုဇွန်တောင် ၁,၀၀,၀၀၀
၂၁ ၂၁-၁၂-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးခင်သိန်း အားရည်စူး၍ ဒေါ်တင်မြင့်၊ သား-ဦးသန့်ဇင်၊ သမီး-ဒေါ်တင်တင်စိန်၊ ဒေါ်ခိုင်ခိုင် ကောင်းမှု။ တိုက်(၁၃)၊ အခန်း(၄)၊ ခရေမြိုင်လမ်း၊ စုပေါင်းအိမ်ယာ၊ သုဝဏ္ဏ။ ၁,၀၀,၀၀၀
၂၂ ၂၂-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ပါရမီ ကောင်းမှု။ ၁၁၉/၁၂၁၊ လသာလမ်း။ ၃၀,၀၀၀
၂၃ ၂၅-၁၂-၂၀၁၇ ဦးတင်ဦး+ဒေါ်မြမြ တို့အားရည်စူး၍ ဦးအေးမြင့်+ဒေါ်စုစုလတ်၊ သား-မင်းယုနိုင်+မသူဇာကျော်၊ မြေး-ဇွဲဝေယံ မိသားစု။ (၃၆၉)၊ ပထမထပ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း။ ၂,၀၀,၀၀၀
၂၄ ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်စာလာဉာဏီ ကောင်းမှု။ ရွှေတောင်မဟာစည် ၁၀,၀၀၀
၂၅ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ နှစ်ဘက်သော မိဘများကိုရည်စူး၍ ဦးဝင်းဖေ+ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်၊ သမီး-ဒေါက်တာ မြတ်သီတာဝင်း၊ ကိုသန်းဌေး မိသားစုကောင်းမှု။ ၁၂/ ကျောင်းကြီးလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၂၆ ၂၉-၁၂-၂၀၁၇ နှစ်ဘက်သော မိဘများအားရည်စူး၍ (ဦးညွန့်ဖေသန်း)+ဒေါ်သောင်းမြင့် မိသားစုကောင်းမှု။
၁၂၅/၄ လွှာ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်။ ၁၀,၀၀၀
၂၇ ။ မိဘနှစ်ပါးနှင့် မောင်-မောင်သန်း အားရည်စူး၍ ဒေါ်ပေ (၈၆)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့၊ မောင်-ဦးသန်း+ဒေါ်မြ၀င်း၊ ဦးပါ+ဒေါ်မြ မိသားစု ကောင်းမှု။ ဒေါ်စိန်စိန်ဇရပ်-မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ။ ၁,၀၀,၀၀၀
၂၈ ၃၀-၁၂-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးကျင်ဟုတ် အားရည်စူး၍ ဒေါ်စိန်မွှေး မိသားစုကောင်းမှု။ ခြံအမှတ်(၁၂)၊ ယမုံနာအိမ်ရာ၊ ဒေါပုံ။ ၁,၀၀,၀၀၀
၂၉ ။ ဖခင်ကြီး ဦးကိုရွှေ+မိခင်ကြီး ဒေါ်သိန်း၊ မောင်-ဦးတိက္ခ တို့အားရည်စူး၍ ဆရာလေး ဒေါ်စန္ဒာ ကောင်းမှု။ အရာတော်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ရေကန်တော်ကြီးနေရာတွင် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းမည့်
ကျောင်းဆောင်အခန်း၊ ဓမ္မာရုံ၊ ဆွမ်းစားဆောင်နှင့် အထွေထွေ အလှူရှင်များ
၁ ၆-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်း(ဥက္ကဋ္ဌ-ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်)နှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ၊ ရွှေပုစွန် မိသားစုများ။ အမှတ်(၁၁၉)၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ (ရေကန်ဆောက်လုပ်ရေးသုံးရန်) ၃၀၀,၀၀,၀၀၀
၂ ၁၁-၁၂-၂၀၁၇ ဖခင်ကြီး သီရိသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးပွင့်ကောင်း+ မိခင်ကြီး အဂ္ဂမဟာသုဓမ္မသိင်္ဂီ ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီ တို့အားရည်စူး၍ သား-ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်း (ဥက္ကဋ္ဌ-ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်)၊ သမီး-ဒေါ်ပွင့်မာခိုင် (ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ၂ - အမျိုးသမီးယောဂီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့) မိသားစုနှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ၊ ရွှေပုစွန်မိသားစုများ။ အမှတ်(၁၁၉)၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၄၁၀,၀၀,၀၀၀
၃ ၁၈-၁၂-၂၀၁၇ EVEREST CURTAINS, NO.99, CONDO ROOM G(1), DHAMAZEDI RD, KAMARYUT. (ဓမ္မာရုံ)
၄ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ မမြသက်မွန် ကောင်းမှု။ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၀၀၆)၊ အောင်ချမ်းသာအိမ်ရာ၊ အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၅ ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်စိုး(ခ)ဦးအထ္ထ အားရည်စူး၍ ဒေါ်ဖြူဖြူ(ခ)ဆရာလေး ဒေါ်မေဓါနန္ဒီ၊ သား- မောင်ဝင်းသူကျော်၊ မောင်ဝေမျိုးနိုင်၊ သမီး-ခင်သူဇာသိမ့်၊ မြေး-သီရိခေတ် (ခေတ္တ-ထိုင်ဝမ်)၊ သမီး- မခင်မိုးသွယ် မိသားစုကောင်းမှု။ ၄၃/၆-လွှာ၊ ရှင်စောပုဘုရားလမ်း၊ ရှင်စောပုရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်း။ ၅၀,၀၀၀
၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ နှစ်ဘက်သောမိဘများအားရည်စူး၍ ဦးဝင်းဖေ၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်၊ သမီး-ဒေါက်တာ မြတ်သီတာဝင်း၊ ကိုသန်းဌေး မိသားစု။ ၁၂/ ကျောင်းကြီးလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၇ ၂၉-၁၂-၂၀၁၇ နှစ်ဘက်သောမိဘ ဆွေမျိုးများအားရည်စူး၍ (ဦးညွန့်ဖေသန်း)+ဒေါ်သောင်းမြင့် မိသားစု။ ၁၂၅/ ၄-လွှာ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်။ ၁၀,၀၀၀
၈ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ဖခင်ကြီး ဦးကိုရွှေ+မိခင်ကြီး ဒေါ်သိန်း၊ မောင်-ဦးတိက္ခ တို့အားရည်စူး၍ ဆရာလေး ဒေါ်စန္ဒာ ကောင်းမှု။ အရာတော်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၁ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု ၁၅,၀၀၀
၂ ၄-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု ၃၀,၀၀၀
၃ ၁၀-၁၂-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါး ဦးသန်းအောင်+ဒေါ်ညွန့်ညွန့်၊ ခင်ပွန်း-ဦးဝင်းမော် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်သီတာအောင် မိသားစုကောင်းမှု။ အမှတ်(၈၇)၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၄ ။ နှစ်ဖက်သောမိဘများကို ရည်စူး၍ ဦးကျော်ကျော်+ဒေါ်အေမီအောင်၊ သမီး-ယွန်းပိုးဥ၊ သား-မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင် မိသားစု။ D-43၊ အေးသာယာလမ်း၊ FMI CITY ၁၀,၀၀၀
၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၇ ဦးမြတ်မင်း+(ဒေါ်ခင်မမ)၊ သမီးကြီး-ဒေါ်ခင်စန္ဒာဦး၊ သားကြီး-ဦးနေမျိုး၊ သားငယ်-ဦးနေစိုး(ခ) ဦးဇော်ဝင်းလှိုင်၊ သမီးငယ်-ဒေါ်ခင်သူဇာ မိဘမောင်နှမတစ်စုကောင်းမှု။ ၁၁၇/ ပင်လုံလမ်း၊ ၃၅-ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၆ ၁၆-၁၂-၂၀၁၇ MR. SEIICHI TAKARABE အားရည်စူး၍ AWITD ၀န်ထမ်းများကောင်းမှု။ ပုဇွန်တောင် ၁,၀၀,၀၀၀
၇ ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ဦးရွှေမြ အားရည်စူး၍ ဒေါ်ဝင်းဝင်းကြည် နှင့်သားသမီးမိသားစု။ တိုက်(၄၉)၊ ဝေဠုဝန်လမ်းသွယ်၊ စမ်းချောင်း။ ၁,၀၀,၀၀၀
၈ ၂၃-၁၂-၂၀၁၇ ဦးမြင့်သန်း+ဒေါ်တင်ဌေး မိသားစုကောင်းမှု။ ဇောင်တန်းရွာ၊ ရွှေဘို။ ၁၀,၀၀၀
၉ ၂၄-၁၂-၂၀၁၇ နှစ်ဘက်သောမိဘများကို ရည်စူး၍ ဦးမင်းထွန်း+ဒေါ်ခင်စောဝေ မိသားစုကောင်းမှု။ ၄၉/ သီရိဂုဏ် အိမ်ရာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၀ ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ ဦးရဲမြင့်+ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး၊ သား-မောင်သက်အောင်၊ မအိသန္တာ မိသားစုကောင်းမှု။ လေးအိမ်စု၊ မအူပင်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၁၁ ၂၉-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်မြမြ မိသားစု(တန့်ဆည်) ကိုအောင်နိုင်၊ မောင်ရန်နိုင်ဆွေ ညီအစ်ကိုတစ်စု ကောင်းမှု။ မှော်စီစာကျေးရွာ၊ ဖားကန့်။ ၁၀,၀၀၀
၁၂ ၃၀-၁၂-၂၀၁၇ ဦးထွန်းမင်းအောင် မွေးနေ့အလှူ၊ သားသား-HARRY (၃)လပြည့်မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်-၁၆၃၊ အလုံလမ်း၊ အလုံ။ ၁,၁၀,၀၀၀
၁၃ ။ ဦးသာရှိန်+ဒေါ်တင်၊ ဒေါ်နတ် တို့အားဦးထိပ်ထား၍ ဒေါ်လှတင်၊ ဒေါ်ခင်မိုး၊ မောင်သန့်စင်ဦး မိသားစုကောင်းမှု။ ကော့မှူး ၂၀,၀၀၀
၁၄ ။ ဒေါ်သီတာမိုး၊ သား-ပြည့်စုံကျော်၊ သမီး-သွန်းရွှေရည်မိုး မိသားစုကောင်းမှု။ ကော့မှူး ၁၀,၀၀၀
၁၅ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ဦးမောင်ညွန့်+ဒေါ်ညွန့်၊ မောင်-ဦးတိက္ခ တို့အားရည်စူး၍ ဆရာလေး ဒေါ်စန္ဒာ ကောင်းမှု။ အရာတော်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၆ ။ ကိုအောင်မိုးသူ+မသင်းကြူမောင်၊ သမီး-သွန်းရတီအောင်၊ သား-ဝေယံလင်းထက်အောင် မိသားစု ကောင်းမှု။ ကော့မှူးမြို့ ၁၀,၀၀၀
၁၇ ။ ဖခင်ကြီး ဦးကိုရွှေ+မိခင်ကြီး ဒေါ်သိန်း၊ မောင်-ဦးတိက္ခ တို့အားရည်စူး၍ ဆရာလေး ဒေါ်စန္ဒာ ကောင်းမှု။ အရာတော်မြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၁ ၈-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ပညာဝတီ ကောင်းမှု။ သန်လျင်သဘာဝရိပ်သာ ၅,၀၀၀
၂ ။ ကွယ်လွန်သူ ဖခင် ဦးရွှေဘိ+ မိခင် ဒေါ်ကြွယ် တို့အားရည်စူး၍ ဦးလှမြင့် ကောင်းမှု။ သြစတေးလျနိုင်ငံ ၁၀,၀၀,၀၀၀
၃ ၁၅-၁၂-၂၀၁၇ နှစ်ဘက်သော မိဘများကို အမှူးထား၍ ဦးတင်ထွဋ်+ဒေါ်မြင့်မိုရ်ဝင်း၊ သား-မောင်မိုးသုခ၊ မောင်ထွဋ်ဦးဝေယံ မိသားစုကောင်းမှု။ ၉၉/B၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၄ ၁၈-၁၂-၂၀၁၇ ဦးဝင်းမောင် မွေးနေ့အလှူ ၊ ၁၂၂၇/ သစ္စာလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၅ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ ဦးညွန့်ဦး (M.D NNO GEOTESH) + ဒေါ်ခင်အေးမြင့် နှင့်ဝန်ထမ်းများကောင်းမှု။ တိုက်(၃)၊ တောင်ဝင်နှင်းဆီလမ်း၊ ရွှေပင်လုံအပိုင်း(၄)၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၁ ၁-၁၂-၂၀၁၇ တောင်ဝိုင်းဆရာတော်ကြီး ဦးအာဒိစ္စ အားရည်စူး၍ တောင်ဝိုင်းလေးဆရာတော် ဦးဝါသ၀နှင့် တပည့် ယောဂီများ ကောင်းမှု။ တောင်ဝိုင်းလေး သတိပဋ္ဌာန်ရိပ်သာ၊ မော်လမြိုင်မြို့။ ၁၆,၁၆,၀၀၀
၂ ၂-၁၂-၂၀၁၇ ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ နရပတိ (၈)နှစ်ပြည့်ရည်စူး၍ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တအဂ္ဂ၀ရ+ တပည့်ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများကောင်းမှု။ ၁၆,၈၂,၀၀၀
၃ ၃-၁၂-၂၀၁၇ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား ဦးထိပ်ထား၍ နာယက မုဒုံဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကုသလာနန္ဒ နှင့် ဦးဝိသုတစာရ၊ ဦးဝေပုလ္လစာရ- UR ၊ ဦးချစ်ခင် မိသားစုကောင်းမှု ၁၅,၈၁,၈၀၀
၄ ၄-၁၂-၂၀၁၇ နာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသူရိယနှင့် မိဘနှစ်ပါး ဦးထိပ်ထား၍ ဦးသန်းဦး+နော်ကညောလား၊ သမီး- ရွှမ်းရတီသန်းဦး မိသားစု ။ စံရိပ်ငြိမ်(၆)လမ်း၊ ကမာရွတ်၊ လှည်းတန်း။ ၆,၉၆,၀၀၀
၅ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ခင်မေမြင့် မွေးနေ့အလှူ ၊ ဦးကျော်သူဂါ+ဒေါ်ခင်မေမြင့်၊ သား-မောင်ရဲဝင့်သူ မိသားစု။ ၄၀၈(A)၊ ယုဇနကွန်ဒိုတာဝါ၊ ရွှေဂုံတိုင်။ ၂,၄၆,၀၀၀
၆ ၆-၁၂-၂၀၁၇ ဖခင်ကြီး ဦးဟန်စော (၄)နှစ်ပြည့် ဦးဟန်စော+မိခင် ဒေါ်မြရင်၊ ဖခင် ဦးဟောင်ငါး+ မိခင် ဒေါ်ငွေကြည် တို့အားရည်စူး၍ ဦးတင်ဝင်း+ဒေါ်မြမြအိန် မိသားစု။ ၃၈၈/ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်း။ ၁,၈၉,၀၀၀
၇ ၇-၁၂-၂၀၁၇ ဦးဝင်းနိုင်+ဒေါက်တာ ခင်ခင်စိုး၊ သမီး- သက်ထက်ဝင်းနိုင်အောင်၊ သား-လက်းထက်ဝင်းနိုင်အောင် မိသားစု။ GNC Myanmar Co.,Ltd အမှတ်(၁၁၃/3-A ၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ အောင်မြေသာ လမ်းသွယ်၊ ရွှေတောင်ကြား(၁)၊ ဗဟန်း။ ၃,၈၁,၀၀၀
၈ ၈-၁၂-၂၀၁၇ ရွှေပုစွန် မိခင်ကြီး အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီ (ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီ) ၄-နှစ်ပြည့်ရည်စူးအလှူ။ ၂,၃၉,၀၀၀
၉ ၉-၁၂-၂၀၁၇ JANG SUNG WOOK, KOREA ၅,၀၂,၆၀၀
၁၀ ၁၀-၁၂-၂၀၁၇ SEO KYUNG OK, KOREA ၅,၁၀,၀၀၀
၁၁ ၁၁-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါက်တာဝင်းမြင့်+သီဟသုဓမ္မသိင်္ဂီ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တို့၏သား-ဒေါက်တာထက်ခိုင်ဝင်း မွေးနေ့အလှူ မြတ်မေတ္တာမွန်ကုမ္ပဏီ မိသားစု။ ခြံ(၃၂/D) ရိပ်သာလမ်း၊ ၆-မိုင်ခွဲ၊ ပြည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၃,၅၈,၀၀၀
၁၂ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ TEO SIAO EC, MALAYSIA ၃,၈၀,၀၀၀
၁၃ ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးကောင်း+ဒေါ်စန်းရီ တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်အေးအေးမော်(မော်ကြီး) သန္တာဝါသဆောင်၊ မဟာစည်ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း။ ၄,၀၁,၀၀၀
၁၄ ၁၄-၁၂-၂၀၁၇ (ဦးစောအောင်) ၃ နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစုကောင်းမှု။ ၅၂(ပ)B ၊ အသောကလမ်း၊ နတ်ချောင်း၊ တာမွေ။ ၄,၇၈,၀၀၀
၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၇ AMY REAP+ BARBARA TEOH, WALTER+TERESA CHOA, U.S.A ၅,၇၃,၀၀၀
၁၆ ၁၆-၁၂-၂၀၁၇ ဦးကျော်မြတ်သူ+နန်းနှင်းယုရှိန် မိသားစုကောင်းမှု။ အမှတ်(၈၂၀)၊ ၄၄-ရပ်ကွက်၊ ကျောက်စိမ်းလမ်း၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၄,၂၀,၀၀၀
၁၇ ၁၇-၁၂-၂၀၁၇ (၄၄)ကြိမ်မြောက် သဒ္ဓါဆွမ်းအလှူ ၊ ဦးကျော်ငြိမ်း+ဒေါ်နုနုစိန် -စိန်ကျော်မိုး မိသားစု။ (109/မြေညီ) ၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။ ၄,၈၀,၀၀၀
၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၇ SAMA NA NA , KOREA ၃,၅၄,၀၀၀
၁၉ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါက်တာဝင်းမြင့်+ သီဟသုဓမ္မသိင်္ဂီ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး၊ သား-ဒေါက်တာဝေယံဖြိုးပြည့်ဝင်း (မွေးနေ့အလှူ) မြတ်မေတ္တာမွန်ကုမ္ပဏီ မိသားစု။ ခြံ(၃၂/၅)၊ ၆-မိုင်ခွဲ၊ ပြည်လမ်း။ ၅,၁၀,၀၀၀
၂၀ ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ဦးခင်မောင်ဝင်း+ဒေါ်ခင်ခင်ဦး (သဒ္ဓါဆွမ်း)၊ အမှတ်(၁၃၃)၊ ဝေပုလ္လ(၃)လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပ။ ၅,၃၄,၀၀၀
၂၁ ၂၁-၁၂-၂၀၁၇ မောင်ဟိန်းဝင်းအောင် (၅)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ ၊ ၂၃၀/ အောင်သုခ(၂)လမ်း၊ ၂၈-ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၄,၅၀,၀၀၀
၂၂ ၂၂-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ထွေး (၈၂)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ ၊ U.S.A CONAGA ၄,၈၇,၀၀၀
၂၃ ၂၃-၁၂-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးအောင်ဖေ အားရည်စူး၍ ဒေါ်အေးအေးဝင်း၊ သား-မောင်ဟိန်းထက်စိုး မိသားစု။ ၇၂၊ ပထမထပ်၊ လမ်း(၅၀)၊ ပုဇွန်တောင်။ ၄,၂၈,၀၀၀
၂၄ ၂၄-၁၂-၂၀၁၇ မောင်ကောင်းမြတ်သူ+မစန္ဒီမောင်မောင် (မင်္ဂလာဆွမ်း) ။ ၅၄၇/ ထွန်းရွှေဝါလမ်း၊ ရွှေပေါက္ကံ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ။ ၅,၂၄,၀၀၀
၂၅ ၂၅-၁၂-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ မိဘများအားရည်စူး၍ ဦးဟန်ညွန့်+ဒေါ်အေးအေးတင်၊ သမီး-မခိုင်ဇင်ထက် မိသားစု။ အမှတ်(၆၆)၊ ၇-လွှာ၊ လမ်း(၅၀)၊ ပုဇွန်တောင်။ ၅,၃၆,၀၀၀
၂၆ ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ ဦးမောင်မောင်ဝင်း+ဒေါ်လွင်သန့်၊ မြေး-မောင်ဖုန်းပြည့်မာန် မိသားစု။ ခြံ(၄၁)၊ အင်းစိန်လမ်းမ၊ ဂန့်ဂေါ်ရိပ်ငြိမ်ခြံ၊ ကမာရွတ်။ ၅,၄၁,၀၀၀
၂၇ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ဘုရား၊ သိမ်၊ ကျောင်း၊ ရဟန်းအစ်မကြီး ဒေါ်တင်တင် (အတွင်းရေးမှူး-အမျိုးသမီးယောဂီ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့) အားရည်စူး၍ သားသမီးမြေးတစ်စု ကောင်းမှု။ အမှတ်(၂/၂-က)၊ ကုန်းမြင့်သာယာလမ်း၊ မရမ်းကုန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၄,၂၃,၀၀၀
၂၈ ၂၈-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ပျို (၃)နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ သားသမီးမြေးများကောင်းမှု။ ၅,၅၀,၀၀၀
၂၉ ၂၉-၁၂-၂၀၁၇ ဦးတင်အောင်+ဒေါ်ကျင်ပု၊ သမီး- ဒေါက်တာခန့်ဝင်း+ဒေါက်တာကြူကြူအောင်၊ သား- မောင်ဘုန်းပြည့်မာန် မိသားစု။ ခြံ(၁၅)၊ ဗိုလ်ချိုလမ်း၊ အင်ကြင်းမြိုင်လုံးချင်းအိမ်ရာ၊ ဗဟန်း။ ၈,၀၄,၀၀၀
၃၀ ၃၀-၁၂-၂၀၁၇ Capt ဌေးမြင့် -မွေးနေ့အလှူ ၊ ၂၀/ကျားကွက်သစ်လမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ။ ၄,၄၄,၀၀၀
၃၁ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ဦးဝင်းဗိုလ် (၄၈)၊ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ ၊ အမှတ်(၄)၊ တင့်ဆန်းလမ်း၊ ဆရာစံ မြောက်/အနောက်၊ ဗဟန်း။ ၄,၇၅,၀၀၀
၁ ၁-၁၂-၂၀၁၇ (၁၄)ကြိမ်မြောက် သဒ္ဓါဆွမ်းအလှူ ၊ ဦးထွန်းကြည်+ဒေါ်ပဲ မိသားစု ။ သာမညသစ်သီး ပွဲရုံ၊ သီရိမင်္ဂလာဈေး ။ ၄၄,၃၅,၀၀၀
၂ ၂-၁၂-၂၀၁၇ မဟာစည်သြ၀ါဒါစရိယဆရာတော်ကြီး သာသနဓဇသိရီပ၀ရဓမ္မာစရိယ၊ ၀ိနယပါဠိပါရဂူ ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ (Ph.D) , Dr.ဘဒ္ဒန္တဇဋလိ အားရည်စူး၍ တပည့်ဒါယကာ+ ဒါယိကာမများ ကောင်းမှု။ ၄၅,၈၄,၀၀၀
၃ ၃-၁၂-၂၀၁၇ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးထိပ်ထား၍ (၂၁)ကြိမ်မြောက် သဒ္ဓါဆွမ်း ။ ပဲနွယ်ကုန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တစန္ဒာဝရ၊ ဦးမောင်ဦး+ဒေါ်လှလှ (ဣစ္ဆာသယ သစ်သီးပွဲရုံ)၊ (ဦးစံသိန်း)+ဒေါ်မြင့်မြင့်ရီ (စံ- သစ်သီးပွဲရုံ) ကောင်းမှု ၁၅,၈၁,၈၀၀
၄ ၄-၁၂-၂၀၁၇ နာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသူရိယနှင့် မိဘနှစ်ပါး ဦးထိပ်ထား၍ ဦးသန်းဦး+နော်ကညောလား၊ သမီး- ရွှမ်းရတီသန်းဦး မိသားစု ။ စံရိပ်ငြိမ်(၆)လမ်း၊ ကမာရွတ်၊ လှည်းတန်း။ ၂၁,၅၄,၀၀၀
၅ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ကိုဇေယျာလင်း+မဖြူဖြူစမ်း တို့၏သမီး မရွှေထိပ်ထားခင် မွေးနေ့အလှူ ၇,၂၅,၀၀၀
၆ ၆-၁၂-၂၀၁၇ စိုင်းတင်ကျော်+မစုစန္ဒီအောင် (မင်္ဂလာဆွမ်း) ၊ ၃၁/ သိန္နီလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၁၀,၁၅,၀၀၀
၇ ၈-၁၂-၂၀၁၇ ရွှေပုစွန် မိခင်ကြီး အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီ (ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီ) ၄-နှစ်ပြည့်ရည်စူးအလှူ။ ၇,၄၁,၀၀၀
၈ ၁၀-၁၂-၂၀၁၇ ဦးတိုက်စိုး (၅)နှစ်ပြည့်အား ရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစု။ အမှတ်(၂၃)၊ ကြို့ကုန်းရိပ်သာ၊ အင်းစိန်။ ၉,၁၆,၀၀၀
၉ ၁၁-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါက်တာဝင်းမြင့်+ သီဟသုဓမ္မသိင်္ဂီ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး၊ သား-ဒေါက်တာဝေယံဖြိုးပြည့်ဝင်း (မွေးနေ့အလှူ) မြတ်မေတ္တာမွန်ကုမ္ပဏီ မိသားစု။ ခြံ(၃၂/၅)၊ ၆-မိုင်ခွဲ၊ ပြည်လမ်း။ ၁၇,၄၇,၀၀၀
၁၀ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ကိုအောင်ထက်+နန်းခမ်းမိုင် (မင်္ဂလာဆွမ်း)၊ အမှတ်(၈၂)၊ ၄၈-လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်။ ၂၄,၀၃,၀၀၀
၁၁ ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ နှစ်ဘက်သောမိဘများကိုရည်စူး၍ ဦးသောင်းဝင်း(၇၁)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အလှူ ၊ ဦးသောင်းဝင်း+ ဒေါ်မူယာ ။ တိုက်(၁၈)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ယုဇနလမ်း၊ ဟံသာဝတီရိပ်မွန်အိမ်ယာ။ ၉,၈၀,၀၀၀
၁၂ ၁၄-၁၂-၂၀၁၇ ကိုနေမျိုးဟိန်း+မစိုးစံဒရီမြင့် (မင်္ဂလာဆွမ်း) ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၂၀,၁၂,၀၀၀
၁၃ ၁၅-၁၂-၂၀၁၇ ကိုမျိုးပိုင်+မဖြူဇင်မင်းလတ် (မင်္ဂလာဆွမ်း)၊ အမှတ်(၅၉/က-၁)၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၂၅,၄၈,၀၀၀
၁၄ ၁၆-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါက်တာကောင်းမြတ်စံ+မဆုမွန်ထက် မင်္ဂလာဆွမ်း ၊ အမှတ်(၆၂)၊ ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ ၁၆,၃၂,၀၀၀
၁၅ ၁၇-၁၂-၂၀၁၇ ကိုသန်းထွန်းအောင်+မမေဦးခိုင် (မင်္ဂလာဆွမ်း)၊ အမှတ်(၁၃)မြေညီ၊ အောင်ဇေယျ(၇)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်၊ သုဝဏ္ဏ။ ၁၆,၁၈,၀၀၀
၁၆ ၁၈-၁၂-၂၀၁၇ ကိုဟန်ထွန်းမောင်+မအိရွှေစင်အောင် (မင်္ဂလာဆွမ်း)၊ အမှတ်(၆၂)၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၂၃,၁၂,၀၀၀
၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါက်တာဝင်းမြင့်+ သီဟသုဓမ္မသိင်္ဂီ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး၊ သား-ဒေါက်တာဝေယံဖြိုးပြည့်ဝင်း (မွေးနေ့အလှူ) မြတ်မေတ္တာမွန်ကုမ္ပဏီ မိသားစု။ ခြံ(၃၂/၅)၊ ၆-မိုင်ခွဲ၊ ပြည်လမ်း။ ၂၁,၃၇,၀၀၀
၁၈ ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ စိုင်းရဲရန်နိုင်အေး+မဆွေမွန်အောင် (မင်္ဂလာဆွမ်း)၊ ခေတ္တ-စင်္ကာပူ ၁၂,၃၀,၀၀၀
၁၉ ၂၁-၁၂-၂၀၁၇ မောင်စိုးပြည့်ဖြိုး+မခိုင်ခိုင်အေး (မင်္ဂလာဆွမ်း) ။ အမှတ်(၂၂၃)၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၄,၁၀,၀၀၀
၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဒေါ်စံရှားတင်- မိသားစု။ အမှတ်(၄၂/C) B. တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းသစ်။ ၈,၇၅,၀၀၀
၂၁ ၂၃-၁၂-၂၀၁၇ ကိုဟိန်းထက်သူ+မဖူးပွင့်ဖြူ (မင်္ဂလာဆွမ်း) ၊ အမှတ်-၁၁၂/A ၊ ပထမထပ်၊ ၅၁-လမ်း၊ အလယ်ဘလောက်၊ ပုဇွန်တောင်။ ၁၉,၈၇,၀၀၀
၂၂ ၂၄-၁၂-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူများဖြစ်ကြသော ဖခင်ကြီး ဦးညိုနှင့် သား-ဦးမြင့်ဆွေ၊ သမီး-မနွယ်နွယ်ပြုံး တို့အား ရည်စူး၍ မိခင်-ဒေါ်လှိုင် နှင့် မိသားစုများကောင်းမှု ။ အမှတ်(၇၃)၊ ရွှေရတနာလမ်း၊ အောင်မြေသာစည် အိမ်ရာ၊ ကမာရွတ်။ ၈,၂၅,၀၀၀
၂၃ ၂၅-၁၂-၂၀၁၇ ဂျေရန်နိုင်အေး+မဖြူဖြူအောင် (မင်္ဂလာဆွမ်း)၊ အမှတ်(၃၆)၊ ၉-လမ်း၊ လမ်းမတော်။ ၂၅,၉၇,၀၀၀
၂၄ ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ ဥက္ကဋ္ဌကြီး (ဦးဝင်းထိန်) (၄)နှစ်မြောက်အားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်ခင်လှနှင့် သားသမီးမြေးများ ကောင်းမှု။ ၆၇/ နှင်းဆီမြိုင်လမ်းသွယ်၊ Rose Park I ၁၇,၅၀,၂၀၀
၂၅ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ဘုရား၊ သိမ်၊ ကျောင်း၊ ရဟန်းအစ်မကြီး ဒေါ်တင်တင် (အတွင်းရေးမှူး-အမျိုးသမီးယောဂီ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့) အားရည်စူး၍ သားသမီးမြေးတစ်စု ကောင်းမှု။ အမှတ်(၂/၂-က)၊ ကုန်းမြင့်သာယာလမ်း၊ မရမ်းကုန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၂၂,၈၂,၀၀၀
၂၆ ၂၈-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါက်တာခန့်ဝင်း+ဒေါက်တာကြူကြူအောင်၊ သား-မောင်ဘုန်းပြည့်မာန် (ရှင်ပြုအလှူ) ။ အမှတ်(၁၅)၊ အင်ကြင်းမြိုင်လုံးချင်းအိမ်ရာ၊ ဗိုလ်ချိုလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၂၉,၅၈,၀၀၀
၂၇ ၂၉-၁၂-၂၀၁၇ ဦးရန်နိုင်+ဒေါ်စန်းစန်း တို့၏သား ဦးဝဏ္ဏ မွေးနေ့အလှူ ၊ ခေတ္တ- U.S.A ၁၂,၁၈,၀၀၀
၂၈ ၃၀-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါက်တာ သန့်ဇော်စိုး+ဒေါက်တာ မို့မို့စံ တို့၏သမီး၊ Bridie Marysoe (၁)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အလှူ။ အမှတ်(၅၂)၊ ဂန္ဓမာ(၃)လမ်း၊ ယုဇနပလာဇာအနောက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၁၁,၇၉,၀၀၀
၂၉ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ မောင်သက်နိုင်မြင့်+မနွေးယုအောင် (မင်္ဂလာဆွမ်း)၊ A-3(304)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ၁၁၀-ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁၄,၆၁,၀၀၀
မဟာစည်တရားတော် ပြန့်ပွားရေး ထာဝရငွေပဒေသာပင်အလှူရှင်များ
စဉ် အလှူနေ့စွဲ အကြောင်းအရာ လှူဒါန်းငွေ(ကျပ်)
၁ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု ၁၀,၀၀၀
၂ ၂-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု ၁၀,၀၀၀
၃ ၃-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု ၁၀,၀၀၀
၄ ၄-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု ၁၀,၀၀၀
၅ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ဦးတင်မောင်လေး+ဒေါ်ဝင်းမာ မိသားစု။ အမှတ်(၆၀၃)၊ တိုက်(A)၊ ပညာတီအိမ်ယာ၊ ရန်ကင်း။ ၁၀,၀၀၀
၆ ။ ဦးသန်းထွန်းမြင့်+ဒေါ်မြတ်မွန်အေး မိသားစု။ (၃၆/၁)၊ ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၅,၀၀၀
၇ ။ ဦးနေ၀င်း အားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်လှလှ မိသားစု ကောင်းမှု။ (၃၆/၁)၊ ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၈ ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ VEN GHII + STUDENTS, TAIWAN ၁၀,၀၀၀
၉ ၁၆-၁၂-၂၀၁၇ ဦးရွှေမြ အားရည်စူး၍ သမီး မဟေမ၀တီ ကောင်းမှု။ အမှတ်(၄၉)၊ ဝေဠုဝန်လမ်းကျယ်၊ စမ်းချောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၀ ။ MR. SEICH TAKARABE အားရည်စူး၍ AWITD ၀န်ထမ်းများကောင်းမှု။ ပုဇွန်တောင် ၅၀,၀၀၀
၁၁ ၁၈-၁၂-၂၀၁၇ ဦးသန်းဌေး+ဒေါ်စန်းရီ မိသားစုကောင်းမှု။ မြို့သစ်(၉)လမ်း၊ ဇီးကုန်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ ၁၀,၀၀၀
၁၂ ။ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဒေါ်နုယဉ်အေး ကောင်းမှု။ မြို့သစ်(၄)လမ်း၊ ဇီးကုန်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ ၅,၀၀၀
၁၃ ။ ဦးဝင်းမောင် (မွေးနေ့အလှူ)ကောင်းမှု။ ၁၂၂၇၊ သစ္စာလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၂၀,၀၀၀
၁၄ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ မမြသက်မွန် ကောင်းမှု။ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၀၀၆)၊ အောင်ချမ်းသာအိမ်ရာ၊ အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်၊ ဗဟန်း။ ၃၀,၀၀၀
၁၅ ။ ဦးညွန့်ဦး (MD UNO GEOTECH)+ဒေါ်ခင်အေးမြင့်၊ ၀န်ထမ်းများ ကောင်းမှု
တိုက်(၃)၊ တော်ဝင်နှင်းဆီလမ်း၊ ရွှေပင်လုံအပိုင်း(၄)၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၁၆ ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်သုမန၊ ဒေါ်ပညာသိင်္ဂီ ကောင်းမှု။ အမျိုးသမီးဆောင်၊ မဟာစည်။ ၁၀,၀၀၀
၁၇ ။ ဦးအောင်သန်း (၈၃)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အလှူ ။ အမှတ်(၁၁၈၁)၊ အတွင်းရှုခင်းသာလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ သာကေတ။ ၁၀,၀၀၀
၁၈ ၂၈-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ကျင်နိုင် အားရည်စူး၍ ဦးလှကျော် မိသားစု။ ၂/သီရိဝေဘာလမ်း၊ ဇ၀နရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁ ၆-၁၂-၂၀၁၇ (ဦးဘချယ်)+ဒေါက်တာ ဒေါ်မြသိန်း မိသားစု ။ ရွှေဂုံတိုင်တာဝါ၊ ဗဟန်း။ ၃,၀၀၀
၂ ။ ဦးအောင်ကိုကို+ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း၊ သား-မောင်ပုည၊ သမီး-မြရည်နန္ဒာအောင် မိသားစု။
ဧကမ္ဘာမြန်မာဆေးတိုက်၊ ၁၃၄၊ တက္ကသိုလ်လမ်းသွယ်၊ ကုက္ကိုင်း၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၃ ။ ဦးကျော်ဇော (နာယကကြီး)၊ ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း။ ၅,၀၀၀
၄ ၃၀-၁၂-၂၀၁၇ ဦးစိုးဝင်း (တက္ကသိုလ်စိုးယဉ်) မဟာမင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ အမှုဆောင်-ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်၊
မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၀ိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာနိဿယကျမ်းကြီး (ပ + ဒု + တ + စ) ၄-အုပ်တွဲ အလှူရှင်များ
၁ ၂-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု ၇- စုံ ၇၀,၀၀၀
၂ ။ ဦးဝင်းဖေ+ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်၊ သား-မောင်သန်းဌေး၊ သမီး-မြတ်သီတာဝင်း မိသားစု။ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃ ၄-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု ၈- စုံ ၈၀,၀၀၀
၄ ၁၅-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းထွေး ကောင်းမှု ။ အမှတ်(၁၄)၊ ဇ၀နတိက္ခလမ်း၊ ဆရာစံမြောက်/အနောက်၊ ဗဟန်း ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅ ။ မောင်စည်သူထိုက် မိသားစု ။ အမှတ်-၆/A ၊ မြောင်းမြလမ်း၊ စမ်းချောင်း ၂- စုံ ၂၀,၀၀၀
၆ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ မမြသက်မွန် ကောင်းမှု ။ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၀၀၆)၊ အောင်ချမ်းသာအိမ်ရာ၊ အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်၊ ဗဟန်း။ ၃- စုံ ၃၀,၀၀၀
၇ ၂၂-၁၂-၂၀၁၇ ဦးမောင်ဝ+ဒေါ်ပြုံး တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်ပြုံးချို၊ ဒေါ်ခင်ပြုံးညို၊ ဒေါ်ခင်ပြုံးအေး ၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်ပြုံးမွှေး ကောင်းမှု။ ၃၃/ သစ္စာလမ်း၊ မရမ်းချိုရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့ ၁၀- စုံ ၁,၀၀,၀၀၀
၈ ၂၅-၁၂-၂၀၁၇ အဖိုးအဖွား မိဘများနှင့် ခင်ပွန်း ဦးစိန်ထွန်း တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကျင်သန်း မိသားစု။ ၃-လမ်း၊ ၁၅-ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူ ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၉ ၂၉-၁၂-၂၀၁၇ နှစ်ဘက်သော မိဘဆွေမျိုးများကို ရည်စူး၍ ဦးညွန့်ဖေသန်း+ဒေါ်သောင်းမြင့် မိသားစု။ ၁၂၅/ ၄-လွှာ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁၀ ။ ကျေးဇူးရှင် မိဘများ ဦးကြည်စိုး+ဒေါ်ဂိန်ကြည် (ခ) ဒေါ်ခင်ကြည် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်တင်တင်ဂူ ၊ ဦးကြည်စိုး မောင်နှမတစ်စု ကောင်းမှု။ တိုက်(၂၀၂)၊ အခန်း(၃)၊ ရန်ကင်း၊ ၁၂-လုံးတန်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁၁ ။ ဦးထိန်လင်း+ဒေါ်သီတာအေး၊ သမီး-သန့်သစ္စာ မိသားစုကောင်းမှု ။ ၃၄/ ဦးဘကျော်လမ်း၊ ဂွတ်(ဒ်)မောနင်းရိပ်မွန်၊ တာမွေလေး။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁၂ ။ ကိုဇေယျာမျိုးတင့်+မနီလာမိုး မိသားစုကောင်းမှု ။ ၅၂/ ယုဇန(၁)လမ်း၊ နွယ်အေးရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု ၄၀,၀၀၀
၂ ၂-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု ၁,၈၀,၀၀၀
၃ ။ ဆရာတော် ဦးသုဒဿန အားရည်စူး၍ မအေးအေးနိုင်၊ မကျော့ ကောင်းမှု။ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊ ကုန်းဇောင်း၊ မကွေးတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၄ ၃-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု ၁,၇၀,၀၀၀
၅ ၄-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု ၂,၁၇,၁၀၀
၆ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ဦးနာဂ၀ံသ ကောင်းမှု၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ရွှေတောင်မြို့။ ၅,၀၀၀
၇ ။ ဒေါက်တာကြည်စိုးလှိုင်+မလောလာချမ်း မိသားစုကောင်းမှု။ U.S.A ၁၀,၀၀၀
၈ ၆-၁၂-၂၀၁၇ မောင်ဝင်းဇော်ဦး (8-12-2017)ရက်နေ့ မွေးနေ့အလှူ ။ (၆၂၈)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ အံ့ကြီး အနောက်ရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၉ ။ ဒေါ်စိန်အေး (၅၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ ။ (၅၆၄)၊ ရေနံချောင်းလမ်း၊ ၉-ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ။ ၁၀,၀၀၀
၁၀ ၇-၁၂-၂၀၁၇ DOAN PHAT TU AN GYANG VIETNAM ၁,၀၀,၀၀၀
၁၁ ၈-၁၂-၂၀၁၇ ဦးကျော်တိုး+ဒေါ်ကျင်ဌေး မိသားစု ။ ချမ်းမြအောင် သစ်သီးပွဲရုံ၊ သီရိမင်္ဂလာဈေး၊ အင်လမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၁၀,၀၀၀
၁၂ ။ ဒေါ်မိမိမြတ် (၅၈)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ ။ (၁၃၀၂)၊ သရဖီလမ်း၊ ၃၄-ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁,၀၀,၀၀၀
၁၃ ၁၀-၁၂-၂၀၁၇ ဦးဝင်းဖေ+ဒေါ်ဆွေရီ မိသားစု။ အမှတ်(၁၇)၊ သစ္စာလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၃၀,၀၀၀
၁၄ ။ ဒေါက်တာ အေးမိစံ (ပါမောက္ခ-သတ္တဗေဒဌာန)၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်။ (၅၆)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ ၅၀,၀၀၀
၁၅ ၁၁-၁၂-၂၀၁၇ ဦးပြား+ဒေါ်ကျင်နု မိသားစုကောင်းမှု။ ၃,၀၀,၀၀၀
၁၆ ။ ဦးမြင့်အောင်+ဒေါ်လဲ့ဝင်းဆွေ မိသားစု ကောင်းမှု ၃,၀၀,၀၀၀
၁၇ ။ ဦးဇေယျာပွင့်+ဒေါ်မူမူမောင် မိသားစုကောင်းမှု ၃,၀၀,၀၀၀
၁၈ ။ ဖွားဖွားကြီး ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီ အားရည်စူး၍ MEDICAL TEAM အဖွဲ့ ၁,၂၀,၀၀၀
၁၉ ။ မိခင်ကြီး ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီ အားရည်စူး၍ ဦးကြီးမြင့် ကောင်းမှု ၁,၀၀,၀၀၀
၂၀ ။ ဦးသိန်းဟန်+ဒေါ်ရွှေမြ မိသားစုကောင်းမှု။ ၁၉၅၊ မင်းလမ်း၊ မအူပင်။ ၁၀,၀၀၀
၂၁ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ဦးအောင်ဝင်း+ဒေါ်သန်းသန်းမြင့် မိသားစု။ အမှတ်(၁၄)၊ ဇ၀နတိက္ခလမ်း၊ ဆရာစံမြောက်/ အနောက်၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၂ ။ ကွယ်လွန်သူ မိဘ(၂)ပါးအားရည်စူး၍ ဒေါ်ထေရီ ကောင်းမှု။ ရတနာရွှေကျောင်း၊ မော်ကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၃ ဒေါ်သီစာရီ ကောင်းမှု။ ရတနာရွှေကျောင်း၊ မော်ကျွန်း။ ၅,၀၀၀
၂၄ ။ ကိုကျော်မြင့်သိန်း+မသဲစုကျော် မိသားစု။ (၃၃၆/B) ကာယသုခလမ်း၊ ၁၂-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်း။ ၁,၀၀,၀၀၀
၂၅ ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဦးအုန်းလွင်၊ ဒေါ်သန်းမြင့်လွင် မောင်နှမတစ်စု မွေးနေ့အလှူ ။
အောင်မြင်ရွာ၊ ဂန့်ဂေါမြို့၊ မကွေးတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၆ ။ ယွန်းရတီဦး (၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ ။ ၂၉၇ ၊ ဘားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၂၇ ။ မိခင်(ဒေါ်ခင်ငြိမ်း)အားရည်စူး၍ သား-ကိုကျော်ကျော်ဝင်း+မတင်မို့မို့ဝင်း၊ သား-ငြိမ်းချမ်းဦး၊ သော်ဇင်ရှိုင်း မိသားစု။ တွံတေးမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၂၈ ၁၄-၁၂-၂၀၁၇ ကိုဇော်မင်းနိုင်+မဇာခြည်နိုင် မင်္ဂလာသက်တမ်း(၉)နှစ်ပြည့်အလှူ ။ တိုက်(၄/၂၀၂)၊ ရွှေပြည်သာအိမ်ရာ၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၉ ၁၅-၁၂-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးသန်းထွန်း (၁)လ (၂၀)ရက်ပြည့်အားရည်စူး၍ ဒေါ်သန်းအေးနှင့် သားသမီး မြေးမြစ် တစ်စုကောင်းမှု။ ၁၄၅၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ ၉-လမ်း၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၃၀ ၁၆-၁၂-၂၀၁၇ ဦးရွှေမြ အားရည်စူး၍ သမီး-မဟေမ၀တီ ကောင်းမှု။ ၄၉၊ ဝေဠုဝန်လမ်းကျယ်၊ စမ်းချောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၃၁ ။ ဦးရန်နောင်စိုး+ဒေါ်မျိုးစန္ဒာ၊ သား-မောင်အောင်ကောင်းမြတ်၊ သမီး-မယမင်းအိမ် မိသားစု။ (၆၈/A)၊ အင်းယားလမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၅၀,၀၀၀
၃၂ ။ MR. SEI CHI TAKARABE အားရည်စူး၍ A.WI.TD ၀န်ထမ်းများကောင်းမှု။ ပုဇွန်တောင် ၅၀,၀၀၀
၃၃ ၁၇-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်သန်းခင်နှင့်ဥပုသ်သည်များကောင်းမှု ။ အမှတ်(၈၂)၊ ဥဇ္ဇနာ(၁၀)လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၃၄ ။ ဦးအောင်ကျော်ဇော+ဒေါ်အေးယဉ်မေ မိသားစု။ သုမေတ္တာ အထည်ဆိုင်၊ ရွှေမင်္ဂလာဈေး၊ (၄၉)၊ ၁၂၁-လမ်း၊ (၄)လွှာ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၁၀,၀၀၀
၃၅ ၁၈-၁၂-၂၀၁၇ ဦးတင့်လွင်+ဒေါ်မေသန်း မိသားစု။ (၂၂-L) အေးရိပ်သာ(၁)လမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်း။ ၅၀,၀၀၀
၃၆ ။ ဦးဝင်းမောင် မွေးနေ့အလှူ ။ (၁၂၂၇)၊ သစ္စာလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၂၀,၀၀၀
၃၇ ။ မောင်အောင်ကောင်းခန့် ကောင်းမှု (ခေတ္တ-စင်္ကာပူ) ။ ၁၆/၆၆၊ ဒေါ်နီလမ်း၊ သုမင်္ဂလာအိမ်ရာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၃၀,၀၀၀
၃၈ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ မမြသက်မွန် ကောင်းမှု (တိုက်-၆)၊ အခန်း(၀၀၆)၊ အောင်ချမ်းသာအိမ်ရာ၊ အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်၊ ဗဟန်း။ ၃၀,၀၀၀
၃၉ ။ ဦးညွန့်ဦး (MD. UNO GEOTHCH)+ ဒေါ်ခင်အေးမြင့် ၀န်ထမ်းမိသားစု။ တိုက်(၃)၊ တော်ဝင်နှင်းဆီလမ်း၊ အပိုင်း(၄)၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၄၀ ။ မောင်သူရိန် မွေးနေ့အလှူ (ခေတ္တ-စင်္ကာပူ)။ (၄) မေတ္တာလမ်း၊ သာသနာ့ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၄၁ ၂၁-၁၂-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်စိုး(ခ)ဦးအထ္ထ အားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်ဖြူဖြူ(ခ) ဆရာလေး ဒေါ်မေဓာနန္ဒီ၊ သား-မောင်ဝင်းသူကျော်၊ မောင်ဝေမျိုးနိုင်၊ သမီး-မခင်သူဇာသိမ့်၊ မြေး-မသီရိခေတ် (ခေတ္တ-ထိုင်ဝမ်) သမီး-မခင်မိုးသွယ် မိသားစုကောင်းမှု။ ၄၃/၆-လွှာ၊ ရှင်စောပုဘုရားလမ်း၊ ရှင်စောပုရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်း။ ၅၀,၀၀၀
၄၂ ၂၂-၁၂-၂၀၁၇ ဦးရန်နိုင်+ဒေါ်စန်းစန်း၊ သား-မောင်ဝဏ္ဏ မွေးနေ့အလှူ ။ အမှတ်-8/m ၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း။ ၅၀,၀၀၀
၄၃ ၂၃-၁၂-၂၀၁၇ မိဘနှစ်ပါးနှင့် အမေအေး တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ပုလဲ ကောင်းမှု၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၄၄ ၂၄-၁၂-၂၀၁၇ နှစ်ဘက်သော မိဘများကိုရည်စူး၍ ဦးမင်းထွန်း+ဒေါ်ခင်စောဝေ မိသားစု။ (၄၉)၊ သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၄၅ ။ ဦးအောင်စိုးကျော်+ဒေါ်အေးမြစိန်၊ သား-အောင်မြကျော်၊ အောင်စံကျော် မိသားစု။ ၁၅၄၊ လွတ်လပ်ရေး လမ်း၊ (က)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ္ဏ။ ၃၀,၀၀၀
၄၆ ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ ဦးရဲမြင့်+ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး၊ သား-မောင်သက်အောင်၊ သမီး-မအိသန္တာ မိသားစု။ လေးအိမ်ရွာစု၊ မအူပင်မြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၄၇ ။ ဦးသိန်းဇော် မွေးနေ့အလှူ ။ ၅၈/ မြို့ပတ်လမ်း၊ ဒလမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၄၈ ။ မောင်စောမိုးပိုင်စိုး+ဒေါက်တာခင်မျက်သွယ် ကောင်းမှု။ ၇၄/ ၄-လွှာ၊ အိုးဘိုလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၄၉ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါက်တာအောင်ဝင်း+ဒေါက်တာအေးနှင်းရီ မိသားစု။ ၃၅/ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ ကမာရွတ်။ ၂,၀၀,၀၀၀
၅၀ ၂၉-၁၂-၂၀၁၇ သက်တော်ရှည်(၁၀၃)နှစ်ရှိ အဖွား-ဒေါ်အေးရှင် မိသားစု။ ဗဟန်း ၁၀,၀၀၀
၅၁ ။ မိခင်ကြီး ဒေါ်သန်းစိန် (၉၁)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အလှူ သမီး-ဒေါ်သန်းအေး ကောင်းမှု။ ၁၄၅/မြေညီ၊ ၉-လမ်း၊ အပိုင်း(၂)၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၅၂ ။ နှစ်ဖက်သောဆွေမျိုးများအားရည်စူး၍ (ဦးညွန့်ဖေသန်း)+ဒေါ်သောင်းမြင့် မိသားစု ကောင်းမှု။ ၁၂၅/၄-လွှာ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်။ ၁၀,၀၀၀
၅၃ ၃၀-၁၂-၂၀၁၇ ဦးအောင်စိုး+ဒေါ်စန်းစန်းအောင် မိသားစု။ အမှတ်(၁၃)၊ သုဒဿန လမ်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၅၄ ။ ဦးကျော်သူရလွင်+ဒေါ်ဝတ်မှုံဝင်း၊ သား-မောင်အောင်စိုးမင်း မိသားစု။ စင်္ကာပူ ၅၀,၀၀၀
၅၅ ။ ဒေါ်မိမိခိုင်နှင့် သားသမီးမြေးတစ်စုကောင်းမှု။ (၄၁)၊ အုတ်ဖိုလမ်း၊ မြို့မရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၅၆ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ မခင်မမသန်း၊ မခင်ပပသန်း ကောင်းမှု ။ အမှတ်(၁၄)၊ ပုသိမ်လမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၅၇ ။ ကွယ်လွန်သူ မိဘများအားရည်စူး၍ ဦးသန့်စင်+ဒေါ်အေးအေးခန့် မိသားစု။ (၃၆၄)၊ ဗြဟ္မ၀ိဟာရလမ်း၊ ဒေါပုံ။ ၁၀,၀၀၀
၅၈ ။ နှစ်ဘက်သော မိဘများနှင့် ဦးဝင်းထက်နိုင်(ခ)ကိုနိုင် နှင့် မျိုးပပကျော် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်တင်တင်ထွေး နှင့်သမီးမြေးများ ကောင်းမှု။ ဦးစံဖေရပ်ကွက်၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၅၉ ။ ကိုဝေဖြိုးကျော်+မအိမြတ်မွန် ကောင်းမှု။ ၂၂/က၊ ဖိုးရာဇာလမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ။ ၁၀,၀၀၀
၆၀ ။ ဦးဇော်ဝင်းထွန်း+ဒေါ်နီနီဝင်း ကောင်းမှု။ ၂၂/က၊ ဖိုးရာဇာလမ်း၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ။ ၁၀,၀၀၀
၆၁ ။ ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီး ဦးနိုင်လင်း(၁၄)နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ ဒေါ်စန်းကြည်နှင့် သားသမီးမြေးမြစ်များ ကောင်းမှု။ ၇၉/၈၁၊ မနော်ဟရီလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၆၂ ။ ဦးမျိုးညွန့်+ဒေါ်ချစ်ချစ်နိုင်၊ သား-မောင်ဇွဲနိုင်အောင် မိသားစု။ ၇၉၊ ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၆၃ ။ ဦးရဲအောင်+ဒေါ်အေးအေးနိုင်၊ သား- မောင်ကောင်းတေဇာနိုင် မိသားစု။ (၆)၊ သီရိဇေယျာလမ်း၊ ပြည်သာယာ၊ ရန်ကင်း။ ၁၀,၀၀၀
၆၄ ။ ဦးပွင့်ကောင်း+ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီ၊ သား-ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်း၊ သမီး-ဒေါ်ပွင့်မာခိုင် မိသားစု၊ ရွှေပုစွန် မိသားစု။ အမှတ်(၁၁၉)၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၅၀,၀၀၀
၆၅ ။ ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်းနှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ၊ ရွှေပုစွန်မိသားစုများ။ အမှတ်(၁၁၉)၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၆၆ ။ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဆရာလေး ဒေါ်နန္ဒာထေရီကောင်းမှု၊ မုံရွာ သတိပဋ္ဌာန်ကျောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၆၇ ။ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဒေါ်ဧသီထေရီ ကောင်းမှု။ မုံရွာ သတိပဋ္ဌာန်ကျောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၆၈ ။ ဦးအောင်ယုံ အားအမှူးထား၍ ဦးမဲ+ဒေါ်မိုးမိုး မိသားစုကောင်းမှု။ မုံရွာ ၁၀,၀၀၀
အဆောက်အဦးဟောင်း ပြုပြင်ရန် အလှူရှင်များ
၁ ၂-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု။ ၂၀,၀၀၀
၂ ။ တောင်ကြီးမြို့ တောစခန်းသာမဟာစည်၊ ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအမှုဆောင်အဖွဲ့ ကောင်းမှု ၅,၀၀,၀၀၀
၃ ၇-၁၂-၂၀၁၇ DOAN PHAT TU ANGIANG , VIETNAM ၁,၀၀,၀၀၀
၄ ၈-၁၂-၂၀၁၇ ဦးကျော်ဟိန်း+ဒေါ်ကျင်ဌေး မိသားစု။ ချမ်းမြေ့အောင် သစ်သီးပွဲရုံ၊ သီရိမင်္ဂလာဈေး၊ အင်လမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၁၀,၀၀၀
၅ ၁၀-၁၂-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးဝင်းထိန် အားရည်စူး၍ ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်လှနှင့် သားသမီးမြေးတစ်စု။ အမှတ်(၆၇)၊ နှင်းဆီမြိုင်လမ်းသွယ်၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ယာ၊ နှင်းဆီဥယျာဉ်(၁)၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀,၀၀၀
၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ VEN CHII & STUDENTS, TAIWAN ၁၀,၀၀၀
၇ ။ မိခင်(ဒေါ်ခင်ငြိမ်း)အားရည်စူး၍ သား-ကိုကျော်ကျော်ဝင်း+မတင်မို့မို့ဝင်း၊ သား-ငြိ်မ်းချမ်းဦး၊ သော်ဇင်ရှိုင်း မိသားစုကောင်းမှု။ တွံတေးမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၇ ဦးဝင်းမောင် မွေးနေ့အလှူ ကောင်းမှု။ ၁၂၂၇/ သစ္စာလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၂၀,၀၀၀
၉ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ ဦးညွန့်ဦး (MD. UNO GEETECH)+ ဒေါ်ခင်အေးမြင့် ၀န်ထမ်းမိသားစု။ တိုက်(၃)၊ တော်ဝင်နှင်းဆီလမ်း၊ ရွှေပင်လုံအပိုင်း(၄)၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၁၀ ၂၂-၁၂-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ မိဘမောင်နှမများ အားရည်စူး၍ ဒေါ်ဥမ္မာအောင်၊ ဦးတေဇအောင်၊ သားသမီးမြေးမြစ် တစ်စုကောင်းမှု။ ၁၄/N-2၊ ခေမာသီရိလမ်း၊ ၉-မိုင်၊ မရမ်းကုန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၁ ။ ဦးမြင့်သန်းနိုင် အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ ဒေါ်သက်ထားနွယ် ကောင်းမှု။ အောင်လံမြို့ ၁၀,၀၀၀
၁၂ ။ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးလှရွှေ+မိခင်ကြီး ဒေါ်ရှင် တို့အားရည်စူး၍ သမီး-ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှေ ကောင်းမှု။ A-2 /306၊ မြေနီကုန်း၊ ဈေးလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၃ ၂၈-၁၂-၂၀၁၇ THAILAND GROUP, THAILAND ၁၁,၃၆,၀၀၀
ကုသိုလ်ဒါန (၁၅)+ (၁၀)မျိုးအလှူရှင်များ
၁ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ခင်မို့မို့မြင့် ကောင်းမှု (၅)မျိုးအလှူ ၃၀,၀၀၀
၂ ။ ဒေါ်ခင်မို့မို့မြင့် ကောင်းမှု (၁၀)မျိုးအလှူ ၉၀,၀၀၀
၃ ။ ဒေါ်ခင်မို့မို့မြင့် ကောင်းမှု (၁၅)မျိုးအလှူ ၂,၅၀,၀၀၀
၄ ၂-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ခင်မို့မို့မြင့် ကောင်းမှု (၅)မျိုး+ (၁၀)မျိုး+ (၁၅)မျိုး အလှူ ၆,၈၀,၀၀၀
၅ ၃-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ခင်မို့မို့မြင့် ကောင်းမှု (၅)မျိုး+ (၁၀)မျိုး+ (၁၅)မျိုး အလှူ ၇,၉၀,၀၀၀
၆ ၄-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ခင်မို့မို့မြင့် ကောင်းမှု (၅)မျိုး+ (၁၀)မျိုး+ (၁၅)မျိုး အလှူ ၇,၃၀,၀၀၀
၇ ။ ယောဂီ ဒေါ်စီစီညွန့်၊ မောင်-ဦးသန်းထွန်း၊ သား-ကိုကျော်ဇေလင်း+မသန်းသန်းဟန်၊ မြေး-မဖြူစင်ပိုဖြိုး၊ မဆုရည်မွန်သန့် မိသားစု ကောင်းမှု။ ၂၀၈(စီ)၊ အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်း။ (၅)မျိုးအလှူ ၁၀,၀၀၀
၈ ၁၀-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါက်တာ အေးမိစံ(ပါမောက္ခ) သတ္တဗေဒဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (၅၆)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ
၉ ၂၄-၁၂-၂၀၁၇ မောင်စွမ်းပြည့်လင်း (၁၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ ။ မင်းလမ်း၊ ဖောင်ကြီး။ (၅)မျိုးအလှူ ၁၀,၀၀၀
၁၀ ၂၅-၁၂-၂၀၁၇ ဦးတင်ဦး+ဒေါ်မြမြ တို့အားရည်စူး၍ ဦးအေးမြင့်+ဒေါ်စုစုလတ်၊ သား-မင်းယုနိုင်၊ မသူဇာကျော်၊ မြေး-ဇွဲဝေယံ မိသားစု ကောင်းမှု။ (၁၅)မျိုးအလှူ ၅၀,၀၀၀
၁၁ ၂၉-၁၂-၂၀၁၇ ကျေးဇူးရှင်မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးကြည်စိန်+ဒေါ်စိန်ကြည်(ခ)ဒေါ်ခင်ကြွယ် တို့အားရည်စူး ၍ ဒေါ်တင်တင်ရှု၊ ဦးကြည်စိုး မောင်နှမတစ်စု ကောင်းမှု။ တိုက်(၂၀၂)၊ အခန်း(၃)၊ ရန်ကင်း(၁၂)လုံးတန်း။ (၁၅)မျိုးအလှူ ၅၀,၀၀၀
၁၁ ။ ဦးထိန်လင်း+ဒေါ်သီတာအေး၊ သမီး-မသန့်သစ္စာ မိသားစုကောင်းမှု။ ၃၄၊ ဦးဘကျော်လမ်း၊ ဂွတ်(ဒ်)မောနင်း ရိပ်မွန်၊ တာမွေလေး။ (၁၅)မျိုးအလှူ ၅၀,၀၀၀
၁၂ ။ ဦးအောင်ဆန်းဦး+ဒေါ်မြတ်မြတ်ခိုင်၊ သား-အောင်ထွဋ်နိုင် မိသားစု ကောင်းမှု။ တောင်ဥက္ကလာပ။ (၅)မျိုးအလှူ ၁၀,၀၀၀
၁ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု။ ၁၀,၀၀၀
၂ ၂-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု။ ၄၀,၀၀၀
၃ ၃-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု။ ၂၀,၀၀၀
၄ ၄-၁၂-၂၀၁၇ ဒေါ်ဆွေဆွေကြည် ကောင်းမှု။ ၁၀,၀၀၀
၅ ။ JUNG JIN HWAN+ HU FAMILY, KOREA ၁၀,၀၀၀
၆ ၅-၁၂-၂၀၁`၇ ဖခင်ကြီး ဦးတင်သိန်း+မိခင်ကြီး ဒေါ်သန်း တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကြင်အေးသန်း မိသားစု ကောင်းမှု။ (၆၆)၊ ဦးကြွယ်ဟိုးလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၁၀,၀၀၀
၇ ၂၉-၁၂-၂၀၁၇ ကိုဇေယျာမျိုးတင့်+မနီလာမိုး မိသားစု။ (၅၂)၊ ယုဇန(၁)လမ်း၊ နွယ်အေးရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံ။ ၁၀,၀၀၀
၈ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ကိုဇော်အောင်+မမြမြ၀င်း ၊ သား-နေသီဟအောင်၊ သမီး- မေသီရိအောင်၊ မယဉ်မွန်အောင် မိသားစု။ (၁)၊ သရ၀ဏ်ရိပ်သာ (၁)လမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၀၁၇-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် ဆွမ်းဝေယျာဝစ္စ(စတို)သို့
စဉ် အလှူရှင်အမည် ပစ္စည်းအမျိုးအစား အရေအတွက် လှူဒါန်းငွေ(ကျပ်)
၁ ဦးချစ်လွင်+ဒေါ်အေး မိသားစု ဆန် ၇၂ ပြည် ၇၂,၀၀၀
၂ ဦးဇနက လဘက်ခြောက် ၅ ပိဿာ ၁၅,၀၀၀
၃ ဦးတိလောက လဘက်ခြောက် ၇ ပိဿာ ၂၁,၀၀၀
၄ ဦးသုဇေယျ လဘက်ခြောက် ၆ ပိဿာ ၁၈,၀၀၀
၅ စတုဒိသာ လဘက်ခြောက် ၆ ပိဿာ ၁၈,၀၀၀
၆ ဦးသန်းစိုး (အကောင့်ကဲယား)
၇ ဦးသန်းအောင် ကောင်းမှု
၈ ဆွမ်းခံရ ဆန် ၈ ပြည် ၈,၀၀၀
၉ ရွှေပုစွန်မိသားစု ကော်ဖီမှုန့် ၅၀ ထုပ် ၃,၅၀,၀၀၀